Atụmatụ Propars - Chọpụta atụmatụ Propars!
Ị nwere ike izipu ngwaahịa gị na Propars site na saịtị e-commerce gị, site na ngwa ịdekọ akaụntụ gị.
ma ọ bụ ị nwere ike bulite na Excel,
Ma ọ bụ site na Propars, ị nwere ike ịme ndenye ozi niile maka ngwaahịa gị otu otu.
Ị nwekwara ike ịkọwa ọnụ ahịa dị iche iche maka ngwaahịa gị maka ebe ahịa dị iche iche. Ya mere, ị nwere ike itinye iwu ọnụahịa dị iche iche na saịtị e-azụmahịa ọ bụla.
Ị nwere ike ịnyefe nhọrọ ngwaahịa dị ka agba na nha gaa n'ahịa niile site na ịkọwa foto dị iche iche na ọnụ ahịa dị iche iche.
Njikwa nkwakọba ihe
Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu ụlọ nkwakọba ihe, ị nwere ike ịkọwapụta ụlọ nkwakọba ihe ndị a na Propars. A na-emelite ngwaahịa nke ụlọ nkwakọba ihe na shelf ozugbo site na ebe ebubata ngwaahịa na shelf ngwaahịa ị na-ere. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike soro ole ngwaahịa gị dị na nke ụlọ nkwakọba ihe.
Ijikwa usoro iwu: Ị nwere ike ịnwe ntinye usoro zuru oke nke na-enye gị ohere ịhụ iwu gị niile sitere na Turkey ma ọ bụ n'ahịa mba ọzọ n'otu ihuenyo na Propars.
Nkọwa niile nke iwu gị; Ị nwere ike ịnweta ozi niile nke onye ahịa zụtara ngwaahịa na otu ihuenyo.
Ị nwere ike ibipụta ụdị mbupu nke iwu na -abata n'otu n'otu ma ọ bụ na nnukwu.
Ị nwere ike ịhụ arịrịọ nkwụghachi & kagbuo site n'ọma ahịa na ihuenyo Propars.
Ị nwere ike mekọrịta usoro nloghachi na Ebe Ahịa. ị nwere ike itinye iwu.
Wepụ ihe mgbochi asụsụ mba ọzọ na Propars
Site na sistemụ ntụgharị akpaka, ozi ngwaahịa ị na-ede na Turkish na-atụgharị na-akpaghị aka ka ọ bụrụ asụsụ obodo ebe ị mepere ahịa ọrịre.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike itinye ntụgharị asụsụ pụrụ iche maka obodo ọ bụla na ngwaahịa gị na Propars.
Ị nwere ike ịhụ ma họrọ ụdị nke obodo ahụ na Turkish na obodo ọ bụla ịchọrọ ire ngwaahịa gị n'ahịa.
Ị nwere ike ịhụ "nzacha ngwaahịa" na Turkish, nke na-eme ka ngwaahịa gị pụta ìhè n'ahịa ahịa, ma dakọtara ya na nzacha ngwaahịa gị ma mepee ha maka ire ere. Ọmụmaatụ: GREEN na nzacha ngwaahịa ga-apụta dị ka GREEN n'ahịa UK.
Na Turkey, onye ahịa Britain na-ahụ akpụkpọ ụkwụ ị na-ere dị ka 40 dị ka 6,5 na onye ahịa America gị dị ka 9, n'ihi ya, ị ga-enweta afọ ojuju ndị ahịa dị elu site na ire ngwaahịa ziri ezi.
Ndị otu Propars na-akụziri gị ọzụzụ pụrụ iche na ngwaahịa gị nwere ike ịga nke ọma na ahịa nke nwere ụdị nkọwa ngwaahịa, foto ma ọ bụ isiokwu.
Ọ na-ahazi nzukọ ịntanetị mgbe niile maka nsogbu ndị ị ga-enweta n'ahịa ma gwa gị azịza ya.
Ị nwere ike nyefee ngwaahịa gị niile na ngwa ndekọ ego gị na ndị na -akwado ya.
Site na ngwa ị na -eji, a na -enye njikọ zuru oke n'etiti Turkey na n'ọma ahịa mba ofesi.
A na-agbakwunye iwu niile sitere n'ahịa mba ofesi na Turkey na ngwa ndekọ ego gị,
Ndị na -akwado ihe nwere ikikere ihe eji eme ihe nkeonwe nke Ministry of Finance kwadoro.
Ị nwere ike nyefee ngwaahịa na saịtị e-commerce gị na ndị na-akwado ya na XML,
Ị nwere ike mepee ngwaahịa gị maka ọrịre n'ọma ahịa dịka nhazi ụdị dị na saịtị gị.
Site na mmelite akpaka, ngwaahịa ọhụrụ agbakwunyere na saịtị gị na-egosipụta na Propars, a na-emelitekwa ụlọ ahịa gị na ebuka gị n'ahịa.
Ị nwere ike ime mgbanwe ngwaahịa na ọnụahịa site na imelite saịtị e-azụmahịa gị. Mgbanwe ọnụahịa ị na-eme na saịtị gị na-egosipụta ozugbo n'ahịa ebe ngwaahịa a na-ere.
Site na ngwọta e-mbupụ Propars, ị nwere ike mbupụ na saịtị e-commerce gị.
Ụlọ ahịa 24 na Turkey na mba 54 dị iche iche
Ị nwere ike ijikwa na otu enyo jiri Propars.
Ntinye ngwa ngwa dị mfe: Ị nwere ike ịgbakwunye ngwaahịa ndị ị gbakwunyere na Propars na ụlọ ahịa gị n'ahịa niile n'otu oge ma mepee ha maka ọrịre.
Mgbanwe ego akpaka: Ị nwere ike ire ngwaahịa gị na-ere na ego mba ọzọ n'ahịa Turkey na TL, ma ị nwere ike ree ngwaahịa gị na TL na ọnụego mgbanwe dị iche iche na mba dị iche iche.
Mmelite ngwa ngwa na mmelite ọnụahịa: Ị nwere ike ịlele ụlọ ahịa gị na ụlọ ahịa anụ ahụ gị na saịtị e-azụmahịa kasị ukwuu n'ụwa Amazon, eBay na Etsy. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe ị na-ere ngwaahịa na Propars na ụlọ ahịa anụ ahụ gị wee gwụchaa, a na-emechi ngwaahịa ahụ na-akpaghị aka maka ọrịre na ụlọ ahịa dị na Amazon France n'otu oge.
Ahịa ndị ọzọ: A na-agbakwunye ụlọ ahịa na Turkey na ahịa ahịa ụwa, Propars, na ahịa ndị dị ugbu a na mba ọhụrụ.
Ugbu: Propars na-esote ihe ọhụrụ emere n'ahịa ma tinye ya na Propars.
Ọnụahịa ọtụtụ: Site na ịmepụta otu ọnụahịa, ị nwere ike ịre ahịa n'ahịa ọ bụla na ọnụahịa ịchọrọ.
Njikwa atụmatụ: Ị nwere ike iji Propars jikwaa njirimara ngwaahịa achọrọ n'ọma ahịa ngwa ngwa.
Nhọrọ ngwaahịa: Ị nwere ike ịnyefe nhọrọ ngwaahịa dị ka agba na nha gaa n'ahịa niile site na ịkọwa foto dị iche iche na ọnụ ahịa dị iche iche.
Nkwekọrịta na amụma